Dhakhtarkaaga ilkaha kumagula hadli doono waxqabadyadan dabiiciga ah ee ilkaha - DARYEELKA CAAFIMAADKA MAGAALADA - XIDHIIDHKA TELEFOONKA
ACCUEIL » QODOBO Dhakhtarkaaga ilkaha kumagula hadli doono wax ku saabsan daaweynta cirridka dabiiciga ah - SANTE PLUS MAG
Dhakhtarkaaga ilkuhu kumagula hadli doono wax ku saabsan daawooyinka ilkaha dabiiciga ah - SANTE PLUS MAG
Welcome / Medecine /
Dhakhtarkaaga ilkaha kumagula hadli doono waxqabadyadan dabiiciga ah ee ilkaha
Ma jirto wax ka xun xanuunka ilkaha, gaar ahaan marka uu dhaco bartamaha habeenkii iyo dhammaan seeraha adduunka, ma baaba'ayo. Si kastaba ha ahaatee, waxaan leenahay fursado dhowr ah si aad u daaweyso ilig xanuunka. Kuwani waa talooyin dabiici ah oo xanuunaaya xanuunka ilkaha.
Sababaha xanuunka ilkaha waxaa ka mid ah godadka, cirridka, cirridka dillaacay, maqaarka ilkaha ama finan ilkaha ah ee carruurta yar yar. Kuwani waxay keeni karaan a xanuun dareenka ilkaha, bararka aagga xanuunka, madax xanuun iyo xummad.
Si loola dagaallamo calaamadahaas oo laga yareeyo ilkaha, halkan waa 10 dabiiciga dabiiciga ah:
Saliid muhiim ah oo dhoobo ah
Sida laga soo xigtay hal waxbarasho lagu daabacay joornaalka sayniska Ururka Britishka ee Dhakhaatiirta Afka Ingriiska iyo Dhakhaatiirta Maxfeer, Eugenol, oo ah dhismo laga helo saliidda qudaarta, waxay waxtar u leedahay yaraynta xanuunka, bararka iyo caabuqa nooc kasta oo ka mid ah xanuunada kale.
Guud ahaan waxaa lagu talinayaa in la isku daro qumbaha oo leh dhowr dhibcood oo dhoobo ah oo saliid ah oo ay ku daboolaan iyagoo ku caawinaya suufka xayawaanka.
Cayenne basbaaska iyo sinjiga
Labadaas dhir udbood ayaa si aad ah wax uga qabta ilkaha. Isku qas tiro xadidan oo ka mid ah ginger iyo cayriin cayayaan leh biyo. Ku dhaji kubadda suufka xalka oo u adeegso meesha waxyeelleyneysa. Dhibaatadani waxay ku habboon tahay xanuunka iyo inaad yareyso bararka.
Sida laga soo xigtay hal waxbarasho Badeeco lagu sameeyey Slovenia, basbaaska Cayenne waa xanuun culus. In a waxbarasho oo lagu sameeyay Iran, mujinqaadka ayaa muujiyay saameyno ka hortag ah oo la mid ah Ibuprofen.
this méthode Dabiiciga ah, fudud oo si wax ku ool ah jeermiska u nuugo iliga iyo afka cusbada, sidaas darteed joojiya xanuunka iyo bararka. Kaliya ku dar qaado qaado kafeega cusbo ku sii koob oo biyo karkaraya una isticmaal sida gargle.
Saliid muhiim ah oo lakab saaran
Saliida lagama maarmaanka ah ee lebbiska ayaa ciribtirta ilkaha waxayna ka saartaa neefta xun.
Sida laga soo xigtay hal waxbarasho of 2013 sameeyey Hindiya, saliidda peppermint tusay bakteeriyada xoog, antifungal, fayruska iyo xanuunka, iyo in la yareeyo xanuunka iyo bararka.
Myrrh waa daawo loogu talagalay caabuqyada afka ee afka. Kaliya biyo ku kari biyo yaryar leh malmal.
Sida laga soo xigtay hal waxbarasho, isticmaalka malmalka sida gogosha loo isticmaalo waxay kor u qaadaysaa bogsashada iyo hagaajinta unugyada waxyeellada leh marka la isticmaalo wakhti gaaban.
In kasta oo ay caraf udgoon oo xoog leh, toon daawo wax ku ool ah si aad u kedisa sabab u ah hantida anti-bararka sabab u jooga xarunta in toon, allicin ah, sida ay a waxbarasho oo lagu qabtay Mexico.
Si loo yareeyo ilkahaaga, ku jajabiso dhoobo oo toon ah oo ku dheji ilka cirridka. Waxa kale oo aad dharka ku dari kartaa dhogorka toonta oo aad ku daboosho iliga.
uunsigii waxa uu leeyahay sifooyin anti-bararka, bakteeriyada iyo fayruska cajiib ah in la baabi'iyo xanuun iyo barar ay sabab u tahay curcumin, hadiyad xarunta in timirta ah, sida ay a waxbarasho US. Diyaarso cajiinkii ay ka kooban tahay shaaha oo ah budo qurub ah, miisaan saliida saliidda qumbaha iyo dhowr dhibcood oo ah saliid lagama maarmaan ah. Adigoo ilkaha ku cadayaya adoo isticmaalaya caleenta waxaad afkaaga ku nadiifineysaa, ilkahaaga oo aad joojisaa xanuunka.
Waa daaweyn wax ku ool ah si loo yareeyo xanuunka. Keliya isku duub a baraf ee ku jira nudaha khafiifka ah kuna dabool marinka dhabanka agagaarka iliga xanuunka leh ee saameyn deg deg ah suuxinta.
Farsamadani ka timid dawooyinka dhaqameed ee Shiineeyska ah waxay ku xiran tahay qodobo gaar ah oo gacantaada ah si loo yareeyo ilkaha. Xaaladdan oo kale, codso a cadaadiska meesha ku taal saldhiga suulkaaga iyo fartaada tusmadaada.
Saliidaha muhiimka ah waxay leeyihiin waxyaabo adag oo ka hortag ah iyo bakteeriyada dilaaga ah si loo baabi'iyo microbes hareeraha cirridka, ilkaha cirridka iyo baabi'iya lakabka. Kuwa wanaagsan saliidaha muhiimka ah si aad isugu daydid xanuunka ilkaha waxaa ka mid ah: laulel, lebpermint ama dhogor.
Isticmaalka daawooyinka dabiiciga ah iyo dhirbaaxada ayaa laga yaabaa in lagu niyad-jebiyo haddii ay dhacdo uur-qaadid ama haddii aad qaadato daaweyn gaar ah. Haddii shaki ku jiro, raadso talo caafimaad.
Haweenaydan quruxda badan 70 sano oo aan sonkorta ku baabbi'in tan iyo sannadkii 28 ayaa muujinaya sawirada jidhkeeda - SANTE PLUS MAG
Anno 1800 Hagaha: Talooyinkeena iyo talooyinkeena si aad u bilowdaan si fiican oo aad u fahamtid wax walba